चुनावी मत परिणामप्रति कांग्रेस र माओवादी बाहेकका दलमा बढ्यो असन्तुष्टि , थाले छलफल – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
चुनावी मत परिणामप्रति कांग्रेस र माओवादी बाहेकका दलमा बढ्यो असन्तुष्टि , थाले छलफल
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १९:१७
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनप्रति पाँच दलीय गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको बेला संयुक्त रूपमा चुनावमा होमिएका दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न गालेका हुन् ।
मत परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो स्थानमा उभिएको छ । यसले अग्रतामा पनि पहिलो नम्बरमै छ । त्यस्तै दोस्रोमा रहेका नेकपा एमालेले पनि चुनावमा धाँधली भइरहेको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म ७२ पालिका जितेर तेस्रो नम्बरमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र भने मत परिणामबाट सन्तुष्ट नै देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको हो ।
उनीहरूले गठबन्धनको समीक्षा हुनुपर्ने र यसको फाइदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्र लिएको आरोप लगाइरहेका छन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार पालिका जितेको छ । ती मध्ये दुई पालिकामा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो । समाजवादी ५९ पालिकाको प्रमुख पदमा अग्रता लिइरहेको छ ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म तीन पालिकाको प्रमुख जितेको छ । भने २९ पालिकामा अग्रता लिइरहेको छ । जनमोर्चाले भने पालिकामा खाता नै खोल्न सकेको छैन ।
जबकि नेपाली कांग्रेसले १४७ पालिका प्रमुख जितेर अग्र स्थानमा छ । अझै १६२ पालिकामा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ । ७२ पालिका जितेको माओवादीले ४७ पालिकामा अग्रता लिइरहेको छ ।
यसरी गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्र फाइदा लिएको भन्दै अन्य दलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा गर्ने बताएका छन् । मंगलबार २९औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा समाजवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गरिनेबताउनु भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार मत परिणाम नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकले नै आफूहरूसँग सहकार्य गर्न नचाहेको बताउनु भयो ।
‘हामी निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्नेछौं । गठबन्धनको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौ,’ अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘समीक्षा गरेर कहाँ राम्रो भयो, कहाँ त्रुटि गर्‍यौं र आगामी दिनमा हामीले के कुरामा होस गर्नुपर्ने हो । त्यस हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति छैन होला ।’
त्यस्तै समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि चुनावी परिणाम सकारात्मक नबनेको बताउनु भयो । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन विषयमा पार्टीका समीक्षा गरिने उनको भनाइ छ । मंगलबार संसद् बैठकबाट निस्किँदै पार्टीका खनालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म जेजस्तो परिणाम आएको छ, उत्साहजनक छैन । कसरी अगाडि जान्छ भनेर हामी छलफल गर्नेछौं ।’
त्यस्तै पार्टीका अर्का नेता जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धन आफ्नो पार्टीका लागि प्रभावकारी नबनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अहिले नै निचोडमा पुग्ने अवस्था त नबनेको भन्दै पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा गरिने बताउनु भयो ।
‘अहिले नै निचोडमा पुग्ने अवस्था त बनिसकेको छैन । तर, हाम्रो लागि गठबन्धन प्रभावकारी नभएको देखियो । सबै परिणाम आइसकेपछि समीक्षा गर्नेर्छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मात्र फाइदा पुगेको बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले सेटिङ गरेकाले उनीहरूले लाभ लिएको बताउनु भयो ।
‘गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादीलाई सेटिङ गरेकाले केही लाभ लिए । तर, उनीहरूले पनि सोचेजस्तो लाभ लिन सकेनन् ।’ उहाले भन्नुभयो । उहाँले आफू स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । स्थानीय स्तरको विषयमा स्थानीय तहमा बसेका नेता तथा कार्यकर्तालाई धेरै विषय थाहा हुने भएकाले केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा अझ राम्रो परिणाम आउन सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए । नेपालको लोकतन्त्र हुर्कदै गरेको अवस्थामा रहेको भन्दै बच्चाले फोहोर गरेको जस्तो अलिअलि फोहोर भएको बताउनु भयो ।
काठमाडौंमा आज पनि बर्षाको
अतिवादी समूह अल कायदाले